आज भद्रकाली माँताको मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । - Gorkhali Post
हाम्राे कार्यक्रम जनताकै लागि हाे, जनताका कुरा उठाउन फेरि पनि कुनै कमी हुने छैन : रवि लामिछाने (भिडियो हेर्नुहोस )
रविले भाबुक हुँदै भने ‘यो मुस्किलको घडीमा दिनुभएको साथले छाती चौडा राख्नेछु, शिर झुक्न दिने छैन’ (भिडियो हेर्नुहोस )
कसैको १ रुपैयाँ खाएको प्रमाणित होस्, म आजै पत्रकारिता छाड्न तयार छु भन्दै भावुक बने रवि लामिछाने (भिडियो हेर्नुहोस )
रवि लामिछानेबारे चर्चित ज्योतिषले यस्तो भने,सनसनिपूर्ण खुलासा हेर्नै पर्ने भिडियो
यो हो शालिकराम पुडाशैनीले प्रेमिका भेट्न कोठा भाडामा लिएको घर समाचार बाहिरीएपछि आपत पर्‍यो (भिडियो हेर्नुहोस )
रवि लामिछानेको जिवन शैली निकै विलासी देखिएको भन्दै प्रहरीद्वारा बैंक खाता माग्यो (भिडियो हेर्नुहोस )
रविको मु९द्धा अझ बाकी छ,रिहा भाको हो निर्दोश हैन,यस्तो रहस्य खोले सर्वोच्च अदालतका वकिलले (भिडियो हेर्नुहोस )
बल्ल मुख खोले नेकपा का नेताले रवी लामिछाने आखिर किन छुटेनन्,आ९न्दोलन अरा९जक हुनु मुख्य का९रण (भिडियो हेर्नुहोस )
रविको समर्थकको लागि दुखको खबर,रवी आज छुट्ने हैन,थुनामै मुद्दा अघि बढाउने,धरौटी माग्ने वा साधारण तारेख छोड्नेबारे बहस हुने हो (भिडियो हेर्नुहोस )
रविलाई हिरासतमै राख्ने भनेपछि सर्वसाधारण भड्किएर उत्तेजित हुँदा, रवि समर्थित प्रदर्शनकारीमाथि लाठीचार्ज र दर्जनबढी अश्रुग्यास प्रहार(भिडियो हेर्नुहोस )
मुख्य पृष्ठ /राशिफल/आज भद्रकाली माँताको मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् ।
आज भद्रकाली माँताको मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् ।
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) : प्रयत्न गर्दा आस मारेको फल प्राप्त हुन सक्छ । स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला । आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन् । साँझतिर व्यावसायिक काममा खर्च बढ्नेछ । अरूका काममा महत्वपूर्ण समय बित्न सक्छ । तापनि प्रयत्न गर्दा चुनौतीहरू पन्छाउँदै केही अवसर हात पार्न सकिने छ । स्वास्थ्य प्रतिकूल रहे पनि हिम्मतले काम लिन सकिने छ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) : प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ । प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ । व्यापार–व्यवसायमा विशेष लाभ लिने समय छ । व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ । दाम्पत्य जीवनमा रमाइलो रहनेछ । आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) : विवादले खिन्न बनाए पनि आत्मबल र हौसलामा कमी आउने छैन । पारिवारिक र दाम्पत्य सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ । व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ । व्यापार तथा उद्योगतर्फ फाइदा हुने योग छ । वैदेशिक यात्रा पनि लाभदायक रहनेछ । समय मनोरञ्जनपूर्ण छ । तर जुनसुकै काममा सफलता आर्जन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय छ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) :आफ्ना विषयवस्तुमा अरूले अधिकार जमाउन सक्छन् । सरकारी कडिकडाउको सिकार भइनेछ । फाइदाका लागि योजनाहरू गोप्य राख्नुपर्छ । कुनै समाचारले मन खिन्न हुनसक्छ । पढाइलेखाइमा ध्यानकेन्द्रित हुन सक्दैन । मनमा कल्पना र भावनाले डेरा जमाउने छ । मनोरञ्जन र खेलवाडले लक्ष्यप्राप्तिमा कठिनाइ उत्पन्न गर्नेछ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) : आज काम बिग्रने डरले सताइरहने दिन हो । सम्झौताले खिन्नता बढाउनेछ भने बुद्धिको सही उपयोग हुन सक्दैन । लक्ष्य पहिल्याउने क्षमतामा कमी आउने छ । परिवारजन तथा बन्धु–बान्धवबीच सम्बन्ध चिसिन सक्छ । तर सतर्क भई व्यवहार गर्नसके बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) : पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ । व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन् । अर्थलाभका अवसर आउने छन् । तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण हुन सक्छ । मित्रवर्ग र बन्धुवान्धवबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । देवालय, मठमन्दिर वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको दर्शन, भ्रमण वा अवलोकन गर्दा शान्तिको अनुभूति प्राप्त हुनेछ ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) : ठीक समयमा सही निर्णय लिन सकिने छ । कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता बढ्नेछ । शत्रुले पनि काममा साथ दिने परिस्थिति बन्नेछ । मोजमज्जा र रामरमाइलोमा धन खर्च गर्न मन हौसिने छ । सोचेको काम उचित समयमा सम्पादन गर्न सकिने र साख जोगाउन सकिने छ । व्यवसाय, पेसा र पठनपाठनमा गरेको सानो मिहिनेतले राम्रो प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिने छ ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) : इच्छाशक्ति बढ्नेछ भने रचनात्मक कार्य शुभारम्भ गर्न सकिने छ । परम्परालाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिने छ । मनग्ये धन आर्जन होला । विछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ । बोलीवचनमा सुमधुरताको आगमन हुनेछ । मनमा उत्साह र उमङ्गको कमी हुनेछैन । लेनदेन र व्यापारव्यवसायमा अभिबृद्धि हुनेछ । मानसम्मान र प्रतिष्ठा बढ्ने छ ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) : चुनौतीहरू पन्छाउँदै रोकिएका काम बनाउन सकिने छ । टाढाको यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ । व्यवसायमा लगानी बढाउन सकिने छ । स्वास्थ्यप्रति सतर्क रहनु पर्छ । भेटघाटमा अलमलिनाले नियमित काममा बाधा पुग्न सक्छ । चुनौती देखिए पनि स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिने छ । दिगो आम्दानी हुने काम फेला पार्न सकिने छ ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) : श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ । गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुने समय छ । समय उत्साहवद्र्धक रहला । व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । पितृधन उपयोग गर्दा अझ लाभ हुन सक्छ । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुनेछ । दाम, नाम, इनाम हातपार्ने बेला छ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) : गरिएका कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ । आम्दानी बढ्नाले परिवारजनका आवश्यकता पूरा हुनेछन् । समुदायको हक हितको संरक्षण गर्दै धेरैको भलाइ हुने काम गर्न सकिने छ । लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ । प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) : धार्मिक वा सांस्कृतिक महत्त्वको यात्राको सम्भावना छ । दिक्क र झर्कोलाग्दो दिन भएपनि साँझमा शुभ कुराको सङ्केत मिल्नेछ । बिर्सिसकेको आफन्त वा साथीभाइसित भेटघाट हुने सम्भावना छ । आफन्त वा साथीभाइले गर्नैपर्ने काममा समेत सघाउ पुर्याउन सक्दैनन्, त्यसैले आफ्नै बुद्धि र बलको प्रयोग गरेमा अन्त्यमा सफलता प्राप्त गर्नु हुनेछ ।
काठमान्डौ , नारायणी नदीमा पानीजहाज सन्चालनको सम्भाव्यतासम्बन्धी पहिलो चरणको अध्ययन सुरु भएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले मंगलबारबाट पहिलो चरणको अध्ययन सुरु गरेको हो ।चितवनको दासढुंगादेखि नेपाल–भारत सिमानामा पर्ने गण्डक ब्यारेजसम्म करिब ९० किलोमिटर क्षेत्रमा नारायणी नदीको गहिराइ नाप्ने काम भइरहेको हो । आवश्यक तथ्यांक संकलन गरिसकेपछि प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने र त्यसको आधारमा अर्को वर्ष विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढाउने योजना रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव ऋषिराम शर्माले जानकारी दिए ।
नाप जाँचको सम्पूर्ण काम एक महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । दुई दिनको अवधिमा १५ किलोमिटर क्षेत्रमा प्रारम्भिक अध्ययन सकिइसकेको छ । अहिलेसम्म कममा ३ देखि बढीमा १२ मिटरसम्म गहिरो स्थान फेला परेको अध्ययन टोलीले जनाए को छ ।‘सबै अध्ययन सकिइसकेपछि कुन प्रकारको जहाज चलाउने भन्ने टुंगो लाग्ने छ । ठूलो जहाज चलाउने नै भए ड्याम बाध्नुपर्ने पनि हुनसक्छ,’ अध्ययन टोलीमा संलग्न परामर्शदाता इनोभेटिभ इन्जिनियरिङ सर्भिसेज प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक अनुप खनालले भने, ‘यद्यपि अहिलेको हाम्रो प्रारम्भिक अध्ययन गहिराइ नाप्ने मात्र हो ।’
नारायणी नदीको गहिराइ नाप्न डीजीपीएस प्रणालीमा चल्ने इको साउन्डर र मोटरबोट जस्ता आधुनिक उपकरणको प्रयोग गरिएको छ ।यो मेसिन यसअघि भेरी बबई बहुउद्देश्यीय परियोजनामा पहिलो पटक प्रयोग गरिएको थियो र सफल पनि भएको थियो।खनालका अनुसार यो अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको प्रविधि हो र यसले गर्ने नापजाँच विश्वासिलो हुन्छ । यो मेसिनलाई डुंगा र्वा याफ्टिङ बोटमा जडान गरी सजिलैसँग नदी वा तालको गहिराइ नाप्न सकिन्छ । नारायणी नदीमा अहिले पानीको बहाव बढेकाले मोटर बोटमा जडान गरेर गहिराइ नाप्ने काम भइरहेको छ ।
Facebook Twitter Google+ Reddit WhatsApp Viber Share via Email Print
एम्बुलेन्स सञ्चालन भद्रगोल : निर्देशिका गज्जबको, कार्यान्वयन भेट्टाउनै गाह्रो !
पाथीभरा माता देख्ने बितिकै भेटी सोरुप एक-एक शेयर गर्दै आजको राशिफल पढ्नुहोस् ।
९ वर्ष पछि राहूकेतुले यी ४ राशिलाई छोडेर जाने भएकाले मिल्नेछ सबैभन्दा ठूलो सफलता, कुन कुन हुन् ती राशी?
केदारनाथ धाम लाई स्वच्छ मनले दर्सन सोरुप सेयर गरि आजको राशिफल पढ्नु होस तपाईंको आजको दिन सुखद बित्ने छ ।
पाथीभरा माता देख्ने बितिकै ॐ लेखेर भेटी स्वरुप एक सेयर गरी सबैले हेर्नुहोस यस्ताे छ तपाइकाे राशी अनुसारकाे भाग्यफल
अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो रविको मोवाइलवाट अस्मिता र शालिकरामसंग टेलिफोनमा कुराकानीको यस्तो रहस्य (भिडियो हेर्नुहोस )
नेकपामा किन असन्तुष्ट छ माधव नेपाल समूह ?
हजारौं बर्षमा मात्र भाग्यमानीले देख्ने दुर्लभ नागनागिनको यौन लिला पूरा भिडियोमा हेरौं र ॐ नम शिवाय कमेन्ट गरौं
आयो डर लाग्दो खबर : सूर्यमा प्वाल, पृथ्वीमा अन्धकार र भू–उपग्रह सन्चारप्रणाली नै ध्वस्त हुनसक्ने वैज्ञानिकको चेतावनी